Amaala Antigua na Barbuda Oge Ego nke Ego | Amaala Antigua na Barbuda
Amaala Antigua na Barbuda Usoro Ego nke Ego
Na mgbakwunye na ego nke nhọrọ itinye ego ahọpụtara, a na-akwụkwu onye ọ bụla n ’ezinaụlọ ụgwọ. Ihe ndia:
Ekwupụtara ụgwọ ọrụ dị na tebụl dị n'okpuru. Iri 10% nke ego gọọmentị na-akwụ (yana anaghị akwụghachi ụgwọ) mgbe edobere ngwa gị yana ego dabere na nnata nke akwụkwọ nkwado sitere n'aka onye nnọchite anya nke nyefere akwụkwọ ikike ahụ. A na-akwụ ndị gọọmentị ụgwọ onye ọ bụla n ’ezinaụlọ.
Ilgwọ Ọrụ Diligence
Ngwa ndị a nọ n'okpuru ike siri ike iji hụ na ọ bụ sọsọ ndị chọrọ akwụkwọ ikike inweta ikike ịbụ nwa amaala nke Antigua na Barbuda. A na-akwụ ụgwọ maka ịdị larịị maka onye ọ bụla n'ezinụlọ gafere afọ iri na otu dịka akọwara na tebụl dị n'okpuru. Enwere ike ịkwụ ụgwọ nkwụsi ike mgbe nnabata nke ngwa ahụ họpụtara ma bụrụ nke akwụgaghị akwụghachi.
Achọrọ onye ezinụlọ ọ bụla ka ọ kwụọ ụgwọ ego ole edepụtara maka mpụga paspọtụ ha.
Feesgwọ nhazi $ 30,000 $ 30,000 maka ezinaụlọ ruru mmadụ anọ $ 30,000 maka ezinaụlọ ruru mmadụ 4 nwere ụgwọ mmụba nke $ 15,000 maka mgbakwunye ọzọ.
Onyinye $ 100,000 $ 100,000 $ 125,000
Oke mkpachapụ anya $ 7,500 $ 7,500 + $ 7,500 maka nwunye,
$ 2,000 kwa dabere 12-17,
$ 4,000 kwa dabere 18 na ihe karịrị $ 7,500 + $ 7,500 maka nwunye,
$ 4,000 kwa dabere 18 na ihe karịrị
* Feesgwọ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ gụnyere ego paspọtụ. Feesgwọ ndị a ga-agbanwe.
* Feesgwọ niile edepụtara dị na dollar US
Nhọrọ Estlọ Akụ .lọ Ahịa
Nhọrọ 1 $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
Nhọrọ 2 - Single Investor $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00
Nhọrọ 3 - C0-investment * $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00
* Abụọ abụọ ma ọ bụ karịa ndị tinyeworo ikike ịre ahịa na nkwekọrịta ịzụta nwere ike itinye ọnụ maka ụmụ amaala site na ntinye ego na ọ bụrụ na onye ọ bụla na-achọ itinye ego kacha nta nke US $ 400,000.
Nhọrọ Azụmaahịa Azụmaahịa
Investor Single $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
Nkwenye ego * $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $$ 5,000,000.00
* Opekata mpe, mmadụ abụọ na-eme nkwonkwo azụmaahịa maka azụmahịa akwadoro na ọnụọgụ US $ 2. Achọrọ onye ọ bụla itinye ego opekata mpe US $ 5,000,000.00.
Mahadum nke West Indies Fund (UWI)
Feesgwọ nhazi $ 15,000 maka onye ọ bụla dabere.
Onyinye $ 150,000 (mkpokọta nhazi nhazi) $ 150,000
Oke mkpachapụ anya $ 7,500 + $ 7,500 maka nwunye,
Ilkwụ ụgwọ nkwụghachi ụgwọ na ụgwọ paspọtụ
Onye tinyere akwụkwọ maka onye isi $ 7,500 $ 20,250
Òtù Ọlụlụ $ 7,500 $ 20,250
Nwa dabere afọ 0-11 $0 $0
Nwa dabere afọ 12-17 $ 2,000 $ 5,400
Onye dabere afọ 18-25 $ 4,000 $ 10,800
Ndi nne na nna nke nọ afọ iri ise na ise $ 4,000 $ 10,800
Gwọ paspọtụ - onye ọ bụla $ 300 $ 810
Mgbakwunye nke ndị tụkwasịrị obi
Òtù Ọlụlụ $ 75,000 $ 202,500
Nwa dabere afọ 0-11 $ 10,000 $ 27,000
Nwa dabere afọ 12-17 $ 20,000 $ 54,00
Nne na nna nọchiri anya afọ 58 gbagowe $ 75,000 $ 202,500
* Duekpụrụ maka ịgbalịsi ike na ego akwụkwọ ikike ngafe
* Ruo Ọktoba 31, 2020, US $ 10,000.00 maka ụmụaka afọ ise ma ọ bụ karịa, US $ 5 maka ụmụaka dị afọ 20,000.00-6
* Biko Mara: ECD = Dollar Caribbean Ebe Ọwụwa Anyanwụ na Dollarị US
Nbelata nke nhọrọ mmepe mmepe mba (NDF) belatara belata% 50; site na US $ 200,000 ruo US $ 100,000 maka ezinụlọ nke nwere mmadụ anọ, yana site na US $ 250,000 ruo US $ 125,000 maka ezinaụlọ mmadụ ise.
Ngwa abụọ (2) sitere na ndị ọzọ metụtara nwere ike ime ka nkwonkwo kwụọ ụgwọ, ebe onye ọ bụla na-arịọ arịrịọ tinye ego dịkarịa ala $ 200,000 iji ruo eru. Niile nhazi na ụgwọ ịdị mkpa na-agbanwe agbanwe.